Maxaabiis ku dhaawacantay xabsiga Gaalkacyo kadib markii ay isku dayeen inay baxsadaan | Radio Muqdisho
Maxaabiis ku dhaawacantay xabsiga Gaalkacyo kadib markii ay isku dayeen inay baxsadaan
Published on January 14, 2013 by admin · No Comments · 1,931 views
Ciidamada ilaalada Xabsiga magaalada Gaalkacyo ayaa maanta ka hortagay Maxaabiis isku dayday in ay ka baxsato xabsiga Magaaladaasi iyadoo sadax ka mid ah maxaabiistaasina ay dhaawacyo soo gaareen.
Maxaabiista maanta isku dayday in ay ka baxsadaan xabsiga magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qeybta uu ka arimiyo maamulka Galmudug. Ayaa waxa ay dhamaayeen ku dhawaad 30 ruux.
Wariyaheena magaalada Gaalkacyo oo la xiriiray saraakiisha ciidamada maamulkaas ayaa waxa ay u xaqiijiyeen in maxaabiis ku jirtay xabsiga magaalada Gaalkacyo ay isku dayeen in ay ka baxsadaan xabsiga kadib markii ay dumiyeen darbi ka mid ah xabsiga.
Sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku dartay in rasaas ay fureen ciidamadii ilaalada ka haysay xabsiga ay ku dhaawacmeen Seddax ka mid ah maxaabiistii isku dayday in ay baxsato balse haatan dib loogu soo celiyay xabsiga.
Baxsashada maxaabiistan ayaa imaaneysa xili mudooyinkii ugu dambeeyay laga deyrinayay xaaladda maxaabiisa ku jirta xabiga ku yaala magaalada Gaalkacyo.